GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kabiye Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Mam Maya Mixe Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Northern Puebla) Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Vietnamese Wallisian Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Akụkọ Alain Broggio kọrọ
ABỤ M ONYE: FRANCE
NDỤ M BIRI: M NA-EME IHE IKE, NA-AKWA IKO, NA-AṄỤKWA ỌGWỤ IKE
Mgbe m dị obere, ndị ezinụlọ anyị biri n’obere obodo a na-akpọ Telankọt, nke dị́ n’ebe ugwu Frans. Papa m bụ onye Frans, ma mama m bụ onye Ịtali. Mgbe m dị afọ asatọ, anyị kwagara n’otu ime ime obodo dị́ na Rom. Ọtụtụ ndị bi na ya dara ogbenye. Ihe bịakwara na-esiri anyị ike. Ego na-esekarịrị papa m na mama m okwu.
Mgbe m dị afọ iri na ise, mama m gwara m ka m na-apụ n’ụlọ anyị mgbe ụfọdụ chọọ ndị mụ na ha ga na-akpa. M bidoro na-eme, m pụọ, mụ anọọ ọtụtụ ụbọchị tupu mụ alọta. Mụ na ndị ọjọọ mechakwara kpawa. Otu ụbọchị, otu nwoke yiri ezigbo mmadụ bịakwutere m, nye m ọgwụ ike, mụ anara ya ṅụọ n’ihi na m chọrọ igosi na aghọọla m dimkpa. O teghị aka, mụ ana-aṅụzi ọgwụ ike, na-akwakwa iko. E dinara m n’ike ọtụtụ ugboro. Ike ịdị ndụ mechara gwụ m. Achọghịzi m ịma ma m̀ ga-adị ndụ ma m̀ ga-anwụ anwụ. Owu bịara na-ama m. Mgbe m dị afọ iri na isii, m nwara igbu onwe m. M gara ṅụọ otu ololo mmanya ọkụ ma wụbanye n’ime ọdọ mmiri. Atụbọrọ m ruo ụbọchị atọ.
Ndụ mechara tọwa m ụtọ. Ma, ebidokwara m ime ihe ike na igwu wayo. M na-agakwuru ndị mmadụ n’ụlọ ha, mụ na ha enwee mmekọahụ, mụ enye ha ọgwụ ọjọọ na-eme ka ụra buru ha, zuruzie ihe ọ bụla bara uru ha nwere. Ndị omekome a ma ama bịara were m n’ọrụ, mụ ana-aga erere ha ọgwụ ike n’ebe dị iche iche n’Ịtali. Ndị uwe ojii na-ejidekarị m. Ndụ m dị dịzi ka o nweghị isi. Ma, obi m na-agwa m na a ga-enwerịrị ihe mere m ji dịrị ndụ. M kpegaara Chineke ekpere, na-arịọ ya ka o mee ka obi ruo m ala naanị otu afọ.
M bịara chọpụta na ndị mụ na ha na-agba ahịa ọgwụ ike nwere ike iji anyaụfụ gbufuo m. N’ihi ya, mgbe m dị afọ iri abụọ na anọ, m kpebiri ịkwaga Ịngland. Ma, tupu mụ akwagawa, m gara hụ mama m. O juru mụ anya mgbe m garuru, hụ otu nwoke aha ya bụ Annunziato Lugarà ka o ji Baịbụl na-agwa mama m okwu. * Ebe m ma nwoke a ka onye omekome, ụjọ jidere m, mụ ajụọ ya ihe ọ na-achọ na nke anyị. Ọ gwara m na ya bụzi Onyeàmà Jehova. Ọ gwakwara m otú o si gbaa mbọ gbanwee àgwà ọjọọ ndị ọ na-akpabu. Ọ gwaziri m okwu mere ka m kwe ya nkwa na m rutehaala Ịngland, na m ga-agwa Ndịàmà Jehova ka ha kụziwere m Baịbụl. Ma ozugbo m garuru Ịngland, ebiwekwara m ndụ otú m si ebi.
O nwere otu ụbọchị m hụrụ otu Onyeàmà Jehova ka ọ na-enye ndị mmadụ Ụlọ Nche na Teta! n’otu okporo ámá na-ekwo ekwo na Lọndọn. Mgbe m hụrụ ya, m chetara nkwa ahụ m kwere Annunziato. M gwaziri Onyeàmà Jehova ahụ na m ga-achọ ka ọ kụziwere m Baịbụl.
N’eziokwu, ihe m mụtara na Baịbụl tụrụ m n’anya. Dị ka ihe atụ, mgbe m gụrụ ihe e dere na 1 Jọn 1:9 gbasara Chineke, o metụrụ m n’ahụ́. Ebe ahụ sịrị: “Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, o kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, nke mere na ọ ga-agbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile.” Amaokwu a mere ka m chebara onwe m echiche maka ndụ ịla n’iyi m na-ebi. Amalitere m ozugbo gawa ọmụmụ ihe n’Ụlọ Nzukọ Alaeze Ndịàmà Jehova. Ndịàmà Jehova nabatara m nnọọ nke ọma. O teela m nọ na-achọ ndị enyi ga-ahụ m n’anya. Ọ bụ ya mere na mgbe m hụrụ otú ha si hụ ibe ha n’anya, ya agụwa m agụụ iso ha na-efe Chineke dị ka ụmụnne.
Ọ bụ eziokwu na o sichaghịrị m ike ịkwụsị ịṅụ ọgwụ ike na ịkwa iko, o siiri m ike ịhapụ àgwà ọjọọ ụfọdụ marala m ahụ́. Achọpụtara m na m kwesịrị ịna-akwanyere ndị mmadụ ùgwù, na-ejikwa obiọma emeso ha ihe. E nwedịrị àgwà ndị na-adịghị mma m ka na-agbasi mbọ ike ịkwụsị. Ma, Jehova na-enyere m aka ịna-agbanwe. N’ime ọnwa isii Ndịàmà Jehova bidoro ịkụziri m Baịbụl, e mere m baptizim, mụ aghọọ Onyeàmà Jehova. N’afọ 1997 ka e mere m baptizim.
Mgbe e mechara m baptizim, alụrụ m otu nwa agbọghọ aha ya bụ Barbara. O tebeghịkwa aka yanwa ghọrọ Onyeàmà Jehova. Mgbe otu n’ime ndị enyi m mbụ hụrụ otú m sirila gbanwee, o bidoro ịmụ Baịbụl. O mechara ghọọ Onyeàmà Jehova, nwanne ya nwaanyị aghọọkwa. Nwanne nwaanyị nne nne m, onye karịrịla afọ iri asatọ, bidokwara ịmụ Baịbụl, e meekwa ya baptizim tupu ya anwụọ.
A họpụtala m ka m bụrụ okenye n’otu ọgbakọ Ndịàmà Jehova dị́ n’ebe m bi. Mụ na nwunye m na-ejekwa ozi ọma oge niile. Anyị na-eji asụsụ Ịtalian akụziri ndị na-asụ Ịtalian bí na Lọndọn Baịbụl. Mgbe ụfọdụ, ọ na-abụ m cheta ndụ m biri ná mbụ, obi ana-ajọ m njọ. Ma, nwunye m na-enyere m aka inweta onwe m. N’ikpeazụ, enwetala m ihe m na-achọ kemgbe, ya bụ, ezinụlọ na-eme m obi ụtọ mgbe niile, na Nna hụrụ m n’anya. Arịọrọ m Chineke ka o mee ka obi ruo m ala naanị otu afọ, ma, o meerela m ihe karịrị ya.
N’ikpeazụ, enwetala m ihe m na-achọ kemgbe, ya bụ, ezinụlọ na-eme m obi ụtọ mgbe niile na Nna hụrụ m n’anya
^ para. 10 Gụọ ihe Annunziato Lugarà kọrọ n’isiokwu a kpọrọ “Baịbụl Na-agbanwe Ndụ Ndị Mmadụ—M Na-eji Égbè M Aga Ebe Ọ Bụla M Na-aga,” nke dị́ n’Ụlọ Nche Julaị 1, 2014, peeji nke 8 na nke 9.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Mee Ka Obi Ruo M Ala Naanị Otu Afọ
IHE E KWURU N’OGE OCHIE NKE KA BARA URU Echegbula Onwe Gị
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere ỤLỌ NCHE Ịkwụwa Aka Ọtọ Ọ̀ Bara Uru?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ ỤLỌ NCHE Ịkwụwa Aka Ọtọ Ọ̀ Bara Uru?
Ịkwụwa Aka Ọtọ Ọ̀ Bara Uru?
ỤLỌ NCHE Ịkwụwa Aka Ọtọ Ọ̀ Bara Uru?